Golaha Wadatashiga qaran oo ka shiray dedejinta qabsoomidda Doorashooyinka Soomaaliya. | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Golaha Wadatashiga qaran oo ka shiray dedejinta qabsoomidda Doorashooyinka Soomaaliya.
Golaha Wadatashiga qaran oo ka shiray dedejinta qabsoomidda Doorashooyinka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir Guddoomiyay kulan degdeg ah oo Golaha Wadatashiga qaran ka yeeshay dedejinta Doorashooyinka Dalka ay bilaabeen Dowlad-Goboleedyada Jubbaland & Koofur Galbeed.
Kulanka oo ku qabsoomay muuqaalka fogaan-aragga ayay madaxda isaga xog-wareysteen xalka ay mareyso Doorashada, sababta ay u bilaaban la’ dahay Doorashada Senatarada metalaya Dowlad-Goboleedyada Hir-Shabeelle, Galmudug, Puntland & Gobollada Waqooyi (Somaliland).
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu Madaxda Dowlad-Goboleedyada Jubbaland iyo Koofur Galbeed ka dalbaday in ay soo dhameystiraan kuraasta dhiman ee Senatarada Aqalka Sare BJFS.
Madaxda Hir-Shabeelle, Galmudug, Puntland & Wakiilada hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Gobollada Waqooyi (Somaliland) waxa uu ka codsaday in ay ku dhaqaaqaan sidii ay u bilaabi lahaayeen howsha laga sugayo.
Golaha Wadatashiga qaran ayaa taageeray dedaallada Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Federaalka uu ku dhexdhexaadinayo labada Garab uu u kala jabay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Gobollada Waqooyi (Somaliland).
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si dhaw ula socda howlaha la xiriira qabsoomidda Doorashooyinka Dalka, Golaha Wadatashiga qaran ayaa ku heshiiyay in joogto ay isaga xog-wareystaan xaaladda dalka gaar ahaan Doorashooyinka.
Next articleWararka Ugu Dambeeyay Ciyaaraha, Lukaku, Kane,Maddison, Saul Iyo Xogo Kale